Nepali Tech Blog – Page3– Just another nepali tech blog
‘प्रेसिडेन्ट डे’ वेबहोस्टिङ अफर (सकियो)
सित्तैमा डोमेन रजिस्टर गर्ने हो ? लौ यसरी गर्नुहोस्
In: ब्लगिङ|Last Updated: January 28, 2014
रजिस्टर गर्नु भन्दा पहिले कृपया पुरै लेख राम्ररी पढ्नुहोला । हो, सित्तैमा डोमेन रजिस्टर गर्न सकिन्छ । तपाई ब्लग अथवा वेबसाइट बनाउँन चाहनु हुन्छ भने सबैभन्दा पहिले चाहिने भनेको डोमेन अर्थात वेबसाइट/ब्लगको नाम नै हो । तर सोचे जस्तो डोमेन नाम पाउँनु अब कम्ता अफ्ठ्यारो छैन । अंग्रेजी सजिला शब्दहरुका प्राय पहिले नै वेबसाइट बनिसकेका… (4 comments)
आफ्नो कम्प्युटरमा आफैलाई के को पासवर्ड नि । अरुले नचलाउन् भनेर पो राख्ने हो त पासवर्ड त, कि कसो ? तर प्रविधि न हो, के चिन्थ्यो ! आफ्नै हातलाई पनि पराइको हात जस्तो व्यवहार गर्दिने क्या =D । अनि हरेक पटक पासवर्ड हानेर बस्नु पर्ने । उस्तै बाठो मान्छे छेउमा पर्यो भने पासवर्ड थाहा पाउला… (2 comments)
In: अनलाइन कमाई|Last Updated: January 25, 2014
हुन त इन्टरनेटमा अनेक किसिमका स्पामहरु फैलिरहन्छन् । दुख नगरी पैसा आउँने बहानाहरु भन्दै तपाईको गोप्यता भंग हुने किसिमका एप्लिकेसन र वेबसाईटहरुमा लग इन गराउँछन् । फिसिङका बारेमा सुन्नु भएको छ कि छैन ? यसैले लोभ लाग्दा प्रलोभनहरु झट्ट विश्वास गरिहाल्न हुन्न । यसो भन्दैमा इन्टरनेटबाट पैसा कमाइदै कमाइदैन भन्ने चाँहि होइन । इन्टरनेटबाट पैसा… (0 comment)